COVİD-19 waxay u tahay tijaabo weyn Dunida - Dhaqaalaha | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirCOVİD-19 waa tijaabo weyn oo ku socota dhaqan-dhaqaale ee adduunka
17 / 03 / 2020 35 Izmir, Turkish Aegean, GUUD, TURKEY
Dunida adduunku waa tijaabo weyn oo ku socota dhaqan-dhaqaale
Ururka Ganacsatada Da'da yar ee Aegean - EGİAD waxay sameysay qiimeyn ku saabsan saameynta bulshada iyo dhaqaalaha ee cudurka coronavirus (COVID-19). Isagoo ku nuuxnuuxsaday in dhaqaalaha adduunka uu “si aad ah” u saameyn doono faafitaanka faafitaanka cudurka, ayuu Guddoomiyaha EGİAD Mustafa Aslan wuxuu carrabka ku adkeeyay in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyinka si loo ilaaliyo dhaqaalaha Turkiga mustaqbalka fog. Isagoo caddeeyay inuu ku rajo weyn yahay in howshan laga tagi doono, ayuu Aslan yiri, “Waxaan ku sii wadaynaa dariiqayaga nidaam cusub. Hadafkeenu dal ahaan waa in aan baabi'inno meheraddan iyada oo wax yar lumay intii suurtogal ah. Waxaan u maleynaynaa inaan ka mid nahay wadamada howshan fuliya si guul leh. Waxaan aaminsanahay inaan ku guuleysan doonno dhacdadan anaga oo leh dareenka saxda ah ee bulshada. ”
Isagoo ku nuuxnuuxsanaya in Xarunta Ururka EGİAD lagu kala jabiyay marka loo eego cabirrada tilaabooyinka la qaaday, Madaxweynaha EGİAD Mustafa Aslan wuxuu sheegay in tillaabooyinka ay ka qaateen xaddiga COVİD-19 ay yihiin kuwa soo socda: Waxaa la go'aamiyay in la isticmaalo aaladaha dijitaalka ah. Intaa waxaa dheer, dhammaan kulamadeenna waa la joojiyay. "Faafinta waxa lagu fuliyay xarunta dhexe ee ururka, 2 qof ayaa jidh ahaan loogu xilsaaray ururka shaqaalaha jooga waajibaadka, inta soo hartayna waxaa loo xilsaaray inay xiriir la leeyihiin guriga."
Isaga oo tixraacaya saameynta caalamiga ah ee fayraska Corona, Aslan wuxuu xasuusiyay in ganacsiga adduunka oo dhami uu marayo hanaan taban. hoos u dhac weyn oo xayiraad safarka iyo ganacsiga, dalxiiska iyo khasaaraha ka mid ah baahida loo qabo in qaybta tafaariiqda saamayn doonto dhaqaalaha ee Turkey. Dhaqaaluhu waa in sidoo kale loogu daro xirmada tillaabooyinka degdegga ah ee la qaaday daacuunka. Waxaa jira waaxyo u baahan in la taageero. Taageeradani waa muhiimad weyn. Suurtagal naguma ahan inaan ka gudubno bidhaamahan muhiimka ah qaab caafimaad qaba annaga oo aan waaxda khaaska ah - iskaashiga dadweynaha. Waxaa muhiim ah in laga hortago taxaddarradan hore si looga hortago dhibaatooyinka dhaqaale kadib marka fayraska laga adkaado. Isagoo xasuusinaya inay shirkado badani joojiyeen socdaalkooda ganacsi muddo dheer ayna joojiyeen qorshayaashooda maal gashiga, ayuu Aslan yiri, “Fayraskan wuxuu tijaabo weyn u yahay Dunida Dhaqaale-Bulsheedka”.
Samsun oo Diyaargaraynaysa Weerarka
Tareenka Xawaaraha Sare wuxuu aad u muhiim u yahay dhaqaalaha iyo dalxiiska Erzurum
Shaqaykan: Xarunta Suuq-geynta iyo Dhaqaalaha Karaman
Dhaqaalaha Trabzon oo ka yimid nidaamka tareenka
Isgaadhsiinta Sare ee Iskenderun wuxuu ballanqaadayaa dhaqaalaha gobolka
Ugu Weyn Caalamka ee 6 ilaa Istanbul. tunnel
Cidna Uma Dhaawacna Kaararka Lacag-dhimista ee Ardayda Lacag-bixinta ah
Gawaarida Gaarka ah ee Dadweynaha ee Lagu Gaaray Magaalada Şanlıurfa